Maninona ny horonan-tsary ataonao no tokony ho eo amin'ny vimeo | Martech Zone
Talata, May 14, 2013 Alarobia 21 Janoary 2015 Douglas Karr
Tianay Vimeo Pro (izany ny rohy ifandraisanay) ary mamporisika ny mpanjifantsika hampiantrano ny lahatsarin'izy ireo izy noho ny antony maro (ankoatry ny Youtube). Na dia manana ny ankamaroan'ny karoka video aza ny Youtube, mampiesona fotsiny ny tabataban'ireo horonantsary mampidi-doza navoaka. Saika tsy hita intsony izay tadiavinao. amin'ny Vimeo, mety ho hitanao ho hita sy hojerena matetika kokoa ny horonan-tsarinao - noho ny tsy fisian'ny tabataba rehetra fotsiny.
Vimeo Pro manolotra vidiny isan-taona tsotra $ 199 isan-taona hatramin'ny 50Gb sy 250,000. Tsy dia lafo loatra izany fa ireo sehatra hafa izay misy kajy mazava kokoa sy fikajiana fantsom-pifandraisana. Ny serivisy fampiantranoana video hafa dia mety mitentina $ 600 ka hatramin'ny dolara an'arivony.
Fifanarahana finday, takelaka ary fahitalavitra
Mpampiasa horonantsary azo zatra
Fifanarahana HTML5 feno
Fanohanana mpilalao horonantsary antoko fahatelo
Ho fanampin'izay, raha orinasa maniry maniry karamaina amin'ny vidéo ianao, Vimeo koa manana Vimeo amin'ny fangatahana. Vimeo On Demand dia fizarana mivantana amin'ny mpankafy miaraka amin'ny mpilalao horonantsary Vimeo rehetra, fitaovana mora ampiasaina, ary mpijery mafana fo. Ireo mpamorona amin'ny karazany rehetra dia afaka mizara ny asany an-tserasera, mahita sy mifandray amin'ireo mpihaino ary mahazo vola bebe kokoa amin'ny fizaram-bola 90/10.
Vimeo On Demand dia manome ny mpamorona tsy fitoviana sy fanaraha-maso tsy manam-paharoa: ny mpamorona dia afaka mampiseho ny asany amin'ny pejy tsara tarehy sy azo ovaina; mametraka ny vidiny manokana; ary mivarotra ny asany amin'ny tranokalany, avy amin'ny Vimeo, na avy amin'izy roa. Ny pejy All On Demand dia natsangana ho tambajotram-pamoronana manerantany Vimeo izay mahatratra 90 tapitrisa mahery ny mpijery.
Join Vimeo Pro ary mahazoa fampiantranoana horonan-tsary amin'ny vidin'ny $ 17 isam-bolana.
Tags: horonan-tsary amin'ny fangatahanavimeo amin'ny fangatahanaVimeo mpanohana